Arivonimamo | Hery - Tsiky dia ampy
Izaho tamin'ny mbola kely matahotra ho very foana rehefa miditra io fiangonana Arivonimamo io. Tany Arivonimamo no nahafantarako izany hoe cereal ataon'ny vozongo breakfast (kellogs) sy bononoka. Ny mpivarotra mofo tsy nalain'i Hery sary lol. (Ny sain-kanina hita foana hi hi)
Nampidirin'i pissoa @ 12:31, 2008-04-26 [Valio]
resa-kisoa : mba hanafaro ary hanaovana kaly rehefa amin'ny fihaonanan'ny namana serasera Roma amin'ny volana aogositra :-)
Fa feno pi ve any Arivonimamo no maha-Arivonimamo azy e (arivonikatry, lol)
Nampidirin'i ikalamako @ 12:52, 2008-04-26 [Valio]
Misaotra anao, lasa , anembonembona aty lavitra aty mamaky ny taratasinao.
Avy any mantsy izahay fa saingy tsy dia fantatro tsara Arivonimamo in'efatra fotsiny atramin'izao no nadehanako tany ary any ambanivohitra fa tsy ao an-tanàna no andehananay, hantenaiko fa hitsidika any aho amin'ity taona ity.
Nampidirin'i Maroala @ 20:05, 2008-04-26 [Valio]
Tena fonenako nandritra ny sivy taona tamin' ny andron' ny fahazazako re ity tananan' Arivonimamo nasehonao ity ry Hery.
Tanana mahafinaritra, somary masiaka varatra rehefa sendra orana, ary matetika tratry ny doro tanety foana amin' ny andro ririnina...
Misy fitsangatsanganana tsara toy ny farihin' Antabahoaka (akaikin' ny radar ASECNA), ny aeroport (izay nisolo an' Ivato temporairement tamin' ny 1979 tany ho any noho ny fanamboarana isan-karazany) sns...
Rehefa vokatra moa ny "tapi" tany Arivonimamo dia voky tapi foana ny kibo fahiny.
Ary izany angamba no nahatonga anao nanoratra lahatsoratra mikasika ny mofo "ketapotsy" sy ny "bononoka" tamin' io blog io e ?...hihihi...
* Toa efa nisy film nataon' i Gothlieb koa tao Arivonimamo raha tsy diso aho...
Nampidirin'i lehilahytsyresy @ 22:54, 2008-04-26 [Valio]
misy mpivarotra ramanonaka kely feo be zao ao @ tsena ao.
Zay no tena voatsikaritro :)
Nampidirin'i simp @ 12:07, 2008-04-28 [Valio]
mahafinaritra ilay tantara fa izahay koa mantsy avy any Arivonimamo ihany koa. Mandalo
le radara be io dia avy eo
antaboka (le lac kely io), dia tonga ery andrangaranga
Nampidirin'i voromailala @ 13:56, 2008-04-28 [Valio]
Fantatro tsara indray Arivonomamo satria izahay mpanao vankansy tao Faharetana, toerana tsy lavitra an'Imerintsiatosika.
Nampidirin'i Laza @ 20:47, 2008-04-29 [Valio]